उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा प्रथम मधेश आन्दोलन भइरहदाँ पानीको फोका भनेर आन्दोलनको अपमान गर्ने राजपाका नेताहरुको गतिबिधि यस्तो छ – Sanghiya Online
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा प्रथम मधेश आन्दोलन भइरहदाँ पानीको फोका भनेर आन्दोलनको अपमान गर्ने राजपाका नेताहरुको गतिबिधि यस्तो छ
महन्थ ठाकुर, राजपा अध्यक्ष मण्डल सदस्य
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर माथि गम्भीर आरोप छ । प्रथम मधेश आन्दोलन भइरहँदा त्यसबेला नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी र काँग्रेस नेता महन्थ ठाकुर तत्कालीन सरकारका मन्त्री थिए ।
सरकारको मन्त्री रहेका ठाकुरले त्यतिबेला मधेश आन्दोलनलाई पानीको फोका भन्दै मधेशमाथि अपमानजनक टिप्पणी गरेका थिए । चारैतिरबाट यी दुई नेताको विरोध हुन थालेपछि त्रिपाठीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । तर, ठाकुरले तत्काल राजीनामा दिएनन् । आन्दोलन चर्किदै गएपछि प्रहरीको दमन पनि बढ्यो । त्यसक्रममा पनि थुप्रै मधेशी युवाले सहादत प्राप्त गरे । त्यतिबेलासम्म मधेशमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । १० दिनभित्र राज्यले आन्दोलनप्रति कुनै बास्ता नगरेपछि फोरम नेपालले पुनः आमहड्तालको घोषणा गर्यो ।
फोरम नेपालसँग वार्ताका लागि महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति गठन भयो । ठाकुरलाई वार्ता समितिका संयोजक बनाएपनि निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । त्यही कारणले फोरम नेपालले अधिकारविहीन समितिका संयोजक ठाकुरसँग वार्ता गर्न मानेको थिएन । तर, अचानक ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भयो । तमलोपा नामको छुट्टै पार्टी गठन अहिलेसम्म पनि सन्देहको घेरामा छ ।
हालैमात्र, मधेशमा लामो समय संघर्ष गरेर इतिहास कायम गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई विघटन गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीमा परिवर्तन गर्नु अर्को सन्देहास्पद चाल सावित हुँदैछ । राजपा पार्टी हो कि मोर्चा छुट्टिएको छैन । यसको ताजा उदाहरण देउवा सरकारसँग गरेको तीन बुँदे सहमति पत्रमा राजपाका ६ जना घटक अध्यक्षहरुको हस्ताक्षरलाई लिन सकिन्छ । प्रथम मधेश आन्दोलनलाई पानीको फोका भन्दै अपमान गर्ने तिनै ठाकुरको नेतृत्वमा तत्कालीन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण हुनु र अहिले उनकै अगुवाईमा राजपा गठनलाई रहस्यमय ढंगले हेरिँदैछ ।
राजेन्द्र महतो, राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य
महतो नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी पनि प्रथम मधेश आन्दोलनताका सरकारमा थियो । जसको नेतृत्व गरेका थिए, लक्ष्मणलाल कर्ण । ठाकुरले जस्तै महतो पनि मधेशको नब्बे प्रतिशत माग पूरा भयो अब आन्दोलनको औचित्य छैन भनेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहँदा ठाकुर र महतोले मधेश विरोधी दुई वटा सम्झौता गरेका थिए । पहिलो, नागरिकता नभएका नागरिकलाई मतदान गर्नबाट बञ्चित गर्ने । दोस्रो, दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक घोषणा । तर, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको आन्दोलनले ती सम्झौतालाई खारेज गर्न बाध्य गराएको थियो ।
मधेश आन्दोलनको बलमा प्राप्त मतबाट आफ्नै श्रीमति शैलीदेवि महतोलाई राजेन्द्र महतोले सांसद बनाएका छन् । मधेशको मुद्दा बोकेको तत्कालीन गजेन्द्र नारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी टुक्राटुक्रामा क्षतविक्षत हुनुको प्रमुख कारक महतो पनि हुन् । महतोकै अनर्गल बक्तव्यबाजीले गर्दा मधेशको ऐतिहासिक लामो आन्दोलन कमजोर बन्न पुगेको थियो ।
राजकिशोर यादव, अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजपा
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट नै सांसद भएको व्यक्तिले पार्टीलाई धोका दिई फोरम फुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । पहिले विजय गच्छदारसँग मिलेर फोरम फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरे । त्यसमा पनि अटाउन नसकेर जयप्रकाश गुप्तासँग मिलेर लोकतान्त्रिक फोरमलाई फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक बनाए । गुप्ता जेल गएको मौका छोपेर राजकिशोर यादवले फोरम गणतान्त्रिकलाई एकलौटी कब्जा गर्दै सञ्चारमन्त्री पद हथियाउन सफल भएका थिए ।
पूर्वसञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव संविधानसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भए । आफू जित्न नसकेपछि मधेश आन्दोलनको बलमा पार्टीलाई प्राप्त मतको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै श्रीमति सरिता यादवलाई उनले सांसद बनाएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्ति राजकिशोर यादव अहिले सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी बन्ने धुनमा अरुलाई तथानाम गाली गर्दै हिडेका छन् ।
बद्री मण्डल, राजपाका वरिष्ठ नेता
तत्कालीन सद्भावना पार्टीको एउटा टुक्राका अध्यक्ष बद्री मण्डल राजावादीको रुपमा बदनाम छन् । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन हुँदा मण्डल ज्ञानेन्द्र शाह नेतृत्वको क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री थिए । जनआन्दोलनमाथिको बर्बर दमन गरेको आरोप मण्डलमाथि पनि छ ।
मृगेन्द्र कुमार सिंह, राजपा नेता
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा मृगेन्द्र कुमार सिंह अञ्चलाधीस पदमा आसीन थिए । जनान्दोलन र प्रथम मधेश आन्दोलनमाथि दमन र मधेशी युवाको हत्या गराएको उनीमाथि आरोप छ । विभिन्न पार्टीहरु प्रवेश गर्ने र चाहेको अवसर नपाउँने बित्तिक सो परित्याग गरी नयाँको खोजीमा जुट्ने उनको प्रवृत्ति बनेको छ ।
सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल, नेता राजपा
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि राजतन्त्रकालमा मन्त्री भइसकेका छन् । तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपामा रहेका शुक्लको राजावादी शक्तिसँग बाक्लै सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा भएको ६ महिने नाकाबन्दीमा तस्करहरुसँग मिलेर भैरहवाको नाकाबन्दीलाई दुरुपयोग गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
जितेन्द्र सोनल, राजपा महामन्त्री
राजपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनलमाथि पनि गम्भीर आरोप छ । जनान्दोलन भइरहँदा सोनल त्यसको विपक्षमा थिए । नेपाली जनता पार्टी गठन गरेर उनले आन्दोलनको भावना विपरीत सक्रिय राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको खुलेरै वकालत गर्दै हिडेका थिए । पहिलो मधेश आन्दोलन पछि भएको २२ बूँदे सम्झौता मधेशीका लागि धोका हो भन्दै षड्यन्त्रमूलक ढंगले रामकुमार शर्मा, भाग्यनाथ गुप्ता, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासले सम्झौताको विरोध गर्ने निहुँमा मधेशी विरोधी शक्तिको इशारामा फोरम नेपालबाट अलग भएका थिए । पछि फोरम मधेश गठन गरी उनीहरुले आन्दोलन विरोधी शक्तिको इशारामा फोरम नेपाललाई विभाजन गर्ने रणनीति बनाएको आरोप छ ।
बृजेशकुमार गुप्ता, राजपा नेता
ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा बृजेशकुमार गुप्ता क्याबिनेट मन्त्री थिए । जनान्दोलनमाथि दमन गर्न गुप्ताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । जनान्दोलन दमन गर्न पूर्वराजाले देशको विभिन्न भागमा प्रतिकार समिति गठन गरेका थिए । त्यतिबेला बृजेशकुमार गुप्ता आफै पनि प्रतिकार समितिका अध्यक्ष थिए । त्यतिबेलादेखि नै राजावादी शक्ति र गुप्ताबीच गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ ।
विमल श्रीवास्तव, राजपा प्रवक्ता
विरगञ्जका पूर्वमेयर विमल श्रीवास्तवमाथि पनि राजावादी भएको गहिरो दाग लागेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले पनि श्रीवास्तवको विरगञ्ज निवासको बैठक कोठामा पूर्वराजा रानीको ठूलो आकारको फोटो झुण्ड्याइको छ । ति तस्वीरलाई उनले देउवा झै दैनिक पूजा गर्ने र ढोग्ने गरेको बताइन्छ ।
पशुपति दयाल मिश्रा, राजपाका सहमहामन्त्री
बाँकेको नेपालगञ्ज स्थायी घर भएका पशुपति दयाल मिश्रा जिल्ला विकास समिति बाँकेका पूर्व सभापति हुन् । शाहीकालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले टिका लगाएर मिश्रालाई सभापति तोकेका थिए । जनान्दोलनमाथि दमन गर्न बाँकेमा पनि प्रतिकार समिति गठन गरिएको थियो, जसका अध्यक्ष थिए, पशुपति दयाल मिश्रा ।
यस्तो चरित्र र प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरुको जमातले भरिएको राजापाका नेताहरुले मधेशको मागलाई कुन ठाउँमा लिएर जाने होलान्, कहाँ लगेर बिसर्जन गर्ने हुन् धेरैको चासो र चिन्ता यसैमा छ ।
राष्ट्र, राज्य र देशमा के भिन्नता छ ? जनता समाजवादीले भनेको बहुराष्ट्रिय राज्य के हो ?
मधेशी मोर्चा र प्रधानमन्त्री बीच आज निर्णायक बार्ता हुदै, मोर्चाले सहमति जनाउने प्रधानमन्त्रीको दाबी
राजपाको गढ सर्लाहीको चक्रब्युह तोडेर सर्लाहीमा केन्द्रिय नेताहरुलाई भित्रियाए उपेन्द्र यादव, फोरमले जवाफ दिन जानेको छ भन्दै राजपालाइ उपेन्द्र यादवको चेतावनी